मिर्गौंला कसरी जोगाउने ?
डा. सुमित आचार्य,
मिर्गौंला भनेको हाम्रो शरीरको पेटको पछाडि ढाडको दुवैतिर रहेको दुईवटा महत्वपूर्ण अंग हो । प्रत्येक मिर्गौंला सिमीको गेडा आकारको ४ देखि ५ इन्च लामो हुन्छ ।
मिर्गौंलाले एक दिनमा सरदर दुई सय लिटर रगत छान्छ र त्यसबाट उत्पन्न शरीरका विकार तत्वलाई पिसाबको रूपबाट बाहिर पु-याउँछ । यसका अतिरिक्त मिर्गौलाले राता रक्तकोष उत्पादन गर्न, हाड मजबुत बनाउन र शरीरमा रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत पु-र्याउँछ ।
मिर्गौंला रोग लागेको पत्ता लगाउन सर्वप्रथम मिर्गौंला परीक्षण गर्नुपर्छ । मिर्गौंला रोगको लक्षण देखिएपछि उपचार गर्छु भन्नु एकदम खतरानाक हुन्छ । किनभने मिर्गौंला रोगको लक्षण देख्नु भनेको मिर्गौंला बिग्रिसकेको अवस्था हो । शरीरको अवस्थाका बारेमा बेलाबेलामा जानकारी लिनुपर्छ । मिर्गौंलाको रोग भनेको लक्षण नै नदेखि हुने समस्या हो । मिर्गौंलाको उपचार निकै नै महँगो पर्ने भएकाले यो रोग लागेपछि शरीरको अवस्था त कमजोर हुन्छ नै आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बनाउँछ ।
मिर्गौंलाले के काम गर्छ ?
मिर्गौंलाले हामीले खाएको खाद्यपदार्थ जुन शरीरलाई चाहिँदैन त्यसलाई शरीर बाहिर फाल्ने काम गर्छ । दूषित पदार्थ शरीरमा नबसोस् भनेर मिर्गौंलाले पिसाबको माध्यमबाट फ्याक्ने गर्छ । मिर्गौंला रोग लागेपछि रगत छानेर दूषित पदार्थ पिसाबमा फाल्ने क्षमता घट्छ ।
मिर्गौंला रोगको लक्षणहरू
– शरीर सुनिने, पिसाब रातो हुने, पिसाब कम हुने, पिसाब धेरै लाग्ने ।
– खाना रुचि कम हुने, वाकवाक लाग्ने ।
– शरीरमा रगत कम भएर शरीर सेतो हुने ।
– शरीरको छाला गाढा कालो भएर जाने ।
– सास फेर्न गाह्रो हुने, छाती दुख्ने, मानिस बेहोससम्म हुने ।
– सानो उमेरमा नै उच्च रक्तचाप हुनुको प्रमुख कारण मिर्गौंलासम्बन्धी रोग हुन सक्छ ।
मिर्गौंला बिग्रनुका कारणहरू
– शरीरमा पानीको मात्रा कम हुनुजस्तै धेरै झाडापखाला लाग्नु वा बान्ता हुनु वा धेरै गर्मीमा काम गर्नु र पर्याप्त मात्रामा पानी नपिउनु ।
– पिसाब मार्गमा ढुंगा वा प्रोस्टेड ग्रन्थी बढेर अवरोध हुने ।
– धेरै मात्रामा औषधिहरू सेवन जस्तै– केही एन्टिबाइटिक र दुखाइ कम गर्ने औषधिहरू ।
– रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिमा कमी ल्याउने रोगजस्तै स् एचआईभी एड्स हेपाटाइटिस ‘बी’ र ‘सी’ वा लामोसमयसम्म भाइरसको संक्रमण ।
– मधुमेह र उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा नहुनु ।
मिर्गौंला रोगबाट बच्न के गर्ने ?
– रक्तचाप र मधुमेहको नियमित परीक्षण गरी नियन्त्रणमा राखौं ।
– स्वस्थ व्यक्तिहरूले पनि कम्तीमा वर्षको एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराई रगत पिसाबको जाँच गराऔं ।
– प्रशस्त मात्रामा पानी पिऔं र जथाभावी औषधि सेवन नगरौं ।